အပျိုကြီးလူပျိုကြီးဆိုတာ…နတ်စည်းစိမ်ခံနေရသူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အပျိုကြီးလူပျိုကြီးဆိုတာ…နတ်စည်းစိမ်ခံနေရသူများ
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Oct 18, 2012 in Copy/Paste | 35 comments
ဒီနေ့ လေထန်ကုန်းပျံပျံ က ကျမဝေါ်မှာလာရေးတယ်.အပျိုကြီး..အပျိုကြီးတဲ့ လေ….
.ပြီးတော့ခဏခဏ..စတယ်ပေါ့…။ဖေ့ ဘုတ်မိသားစုကချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့ ကစနောက်တတ်ကြတယ်။ စိတ်မဆိုကြဘူး..သူ့ ဥိးသူပြောနြ့ တကယ့်နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုလေးပါ။
ဒါကြောင့်ကျမလိုဘဲ..တုန့် ပြန်နိုင်အောင်(မုန်းလို့၊စိတ်ဆိုးလို့မဟုတ်ပါ…စာပေသာအဖော်ပြုတတ်သူမလို့ ..စာပေရေးရင်းဘဲပြန်လိုက်ပါတယ်။။
May Thuzar Kyaw ရဲ့ အပျိုကြီးလူပျိုကြီးဆိုတာuိုပြန်မန့် ရင့်း အပျိုကြီးလူပျိုကြီးဆိုတာ…နတ်စည်းစိမ်ခံနေရသူများမိတ်ဆက်ပိုစ့် တင်လိုက်ပါတယ်။။။
May Thuzar Kyaw ရဲ့ အပျိုကြီးလူပျိုကြီးဆိုတာ…နတ်စည်းစိမ်ခံနေရသူများနဲ့ မိတ်ဆက်ပိုစ့် တင်လိုက်ပါတယ်။။။
ဒီစာစုလေးကတော့မေတို့ရဲ့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ခင်မင်ရာဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက လူပျိုကြီး အပျိုကြီး
အိမ်ထောင်ရှင်များနှင့် အိမ်ထောင်ပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသူများ အနေနဲ့ဒီ စာကိုဖတ်ဖို့မတိုက်တွန်းလိုပါ……
လေ့ရှိကြပါတယ်။ ရယ်စရာလူသားအဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်……ထိုအခါ ယခင်အေးချမ်းနေတဲ့ဘ၀မှ ပူပင်သောက
များလှစွာသော အိမ်ထောင်သည်ဘ၀သို့ ကူးပြောင်းသွားပြီး ဒုက္ခရောက်ကြရသော လူပျိုကြီး အပျိုကြီးများစွာကို
ဘာအနှောင်အဖွဲ့မှမရှိလို့ လွတ်လပ်မှုကိုအပြည့်အ၀ခံစားရတယ် … စိတ်ထဲရှိရင်ရှိသလို ထလုပ်နိုင်တယ် ဘယ်သူ့သြဇာမှခံစရာမလိုပါ….
အိမ်ထောင်သည်တွေကသားစာမို့ မယားစာမို့ မစားရက်မသောက်ရက်ရှိနေမယ့်အချိန်မှာ သူ့ဗိုက်သူဝအောင်ဖြည့်
ခွင့်ရတဲ့လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေကတော့ အဟာရအပြည့်အ၀ရပါတယ်။ ဆေးမြီးတိုနဲ့အိမ်ရှင်မတွေဆေးကုနေချိန်မှာ
အိမ်ထောင်သည်တွေကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မှီခိုအားကိုးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတို့ကတော့
မျှဝေစရာလူမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်အားကိုကိုးပြီးကြိုးစားကြပါတယ် ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကောင်းကျိုးကိုကိုယ်ပဲခံစား
ရမှာဖြစ်သလို ဆိုးတာလုပ်ရင်လည်းကိုယ်ပဲခံစားရမယ် ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်လို့ အတတ်နိုင်ဆုံး
အချိန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သာသနာပြုတဲ့ကိစ္စမှာ လူရောစိတ်ပါမြှုပ်ပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်
အိမ်ထောင်သည်တွေကိုအကူအညီတစ်ခုတောင်းကြည့်ပါ။ အိမ်ပြန်ပြီးတိုင်ပင်လိုက်အုံးမယ်ပြောတာနဲ့ ကြုံပါမယ်
လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေကတော့စက္ကန့်မဆိုင်းကူညီပါလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့်လည်းအများစုက တစ်ခုခုအကူအညီလိုရင်
အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေကိုပဲအားကိုးကြပါတယ်၊ ဒါဟာပါရမီဖြည့်ပေးနိုင်စွမ်းမြှင့်တာကိုဖော်ပြတာပါ
လူပျိုကြီး အပျိုကြီးဘ၀နဲ့အများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်သွားတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်…….
အပျိုကြီး လူပျိုကြီး နဲ့ဘဲနေတာကောင်းသလားလို့မေးရင် ? သိချင်သလား နေကြည့်ပေါ့လို့ ဖြေမယ်ဗျာ။
ဒါဆို အိမ်ထောင်ပြုရင်ကော ကောင်းသလာလို့ မေးရင် ? သိချင်တာလား ယူကြည့်ကြပေါ့လို့ဘဲ ဖြေဖြစ်မှာ ပါဘဲဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ လူပျိုကြီး အဖြစ်နဲ့ဘဲ နေတာကောင်းသလားဆိုတဲ့ အဖြေကိုမသိချင်ခဲ့သူမို့–။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က family life ကို ပိုပြိး
မိသားစုတာဝန်နဲ့စည်းကမ်းလေးတွေ လိုက်နာ
ကန့် ကွက်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူးရွှေအိမ်စည်ရယ် ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ နေရတဲ့ အပျိုကြီးတွေ အကြောင်းလေးလဲ ပြောချင်လို့ ။
နတ်စည်းစိမ်ခံစားရတဲ့ အပျိုကြီးဆိုတာမျိုးကတော့ လုံးဝ တကိုယ်ရည် တကာယ၊ အိမ်မှာတယောက်တည်းတည်း သီးသန့် နေသူများတော့ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတွေ့ ဘူးတဲ့ အပျိုကြီးများ (ကျွန်မအဒေါ်အပါအ၀င်ပေါ့ ) တော့အဲ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်မအဒေါ်အကြောင်းကိုအရင်ပြောပြပါမယ်။ သူက သားသမီးငါးယောက်ထဲမှာ အပျိုကြီးအဖြစ်နဲ့မိဘနှစ်ပါးကို ပြုစုနေတဲ့ သူပါ။ ကျန်တဲ့ မွေးချင်း ၄ ယောက်က အိမ်ထောင်အသီးသီးကျပြီးအိမ်ခွဲနေကြ တော့ အပျိုကြီးဖြစ်သူ ကျွန်မအဒေါ်က မိဘနှစ်ပါးကို အနီးကပ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးနေတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက ဒီလို မျိုးများတယ်လေ။
အဲဒီတော့သူ့ ခမျာ နတ် စည်းစိမ်ကို မခံစားရပါဘူး။ မိဘနှစ်ပါးတာဝန်အပြင် ကျွန်မမိဘများက မွေးတဲ့ ကျွန်မတို့ မောင်နှမနဲ့ အခြားသော ၀မ်းကွဲ မောင်နှမများကိုလည်း အပျိုကြီးက ချစ်သေးတော့ တူ တူမတာဝန်တွေကလည်းမသေးပါ။
နောက် သက်ကြီးမိဘများနဲ့ နေသူဆိုတော့ မိဘတွေကလည်း အသက်ကြီးနေကြတော့ ကျန်တဲ့ ရပ်ရေး ရွာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စကို မိဘတွေကိုယ်စား လုပ်ပေးရပါသေးတယ်။
နောက်အပျိုကြီးတယောက်ကတော့ မောင်တွေ အစ်ကိုတွေက အိမ်ထောင်တွေကွဲလာကြတော့ ပါလာတဲ့သားသမီးအားလုံးကို တာဝန်ယူပြီး လုံးလည်လိုက်နေတာကိုလည်း တွေ့ ဘူးပါတယ်။
ကျွန်မသူငယ်ချင်းတယောက်မှာလည်း မောင်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူကတော့ အပျိုကြီးမလုပ်ဘူးတဲ့။
မဟုတ်ရင် ငါ ဘုံကျွန် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။
မောင် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း နှမ မီးဖိုချောင်လို့အဆိုရှိလို့ တဲ့။
ဘာသာရေး လုပ်နိုင်တာ။ လှပအောင် နေတာတွေကတော့ ချွင်းချက်မရှိသဘောတူပါတယ် တချို့တချို့ သော အပျိုကြီးများ နတ်စည်းစိမ်မရနိုင်ကြခြင်းကို မြင်နေရလို့ ရေးလိုက်တာပါ။ တခြားဘာသဘော မှမရှိပါဘူး။
မိဘနှစ်ပါးပြုစုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ ဂုဏ်နဲ့ တင် သူ့ ဘ၀ကကျေနပ်စရာပါ..
သံယောဇဉ်အမျှင်အတန်းအရ တူတူမ တွေ စောင့်ရှောက်ရတာတော့ သူ ကံပေါ့
တူတူမတွေ က လည်းသူကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးဆပ်ဖို့ သင့်ပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ (((အပျိုကြီး)))ဆိုတဲ့ ဘလော့ ပိုစ့်ထဲ ကလို…ကားတစ်ဝီ၀ီစားလိုက်သွားလိုက်..
အမေ သွားချင်ရာလိုက်ပို့ လိုက်နဲ့ မလို့ …နတ်စည်းစိမ်တင်စားမိပါတယ်
သိပ်မကြာသေးခင်..၃ လလောက်က ဖေဖေဆုံးတယ်လေ….
မေမေ တစ်ယောက်ထဲ အထီးကျန်နေမယ်ခံစားမိလို့ …2013 ဆို ကျမ ကအလုပ်ကထွက်မယ်…
အဲ့ သလိုနေနိုင်ဖို့ နှစ်အတော်ကြာစုဆောင်းထားရတဲ့ အဓိက က ငွေကြေးထင်ပါတယ်။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း…မာနလား မစွံ့ တာလား ညံ့တာလား….လူတွေ ကိုမယုံတတ်တာလား..ကိုယ်တိုင်ကဘဲကပ်စေးနဲတတ်လို့ လား..(ဟုတ်တယ်နော်…ကိုယ်ရှာထာားတြ့ ငွေပြန်ပေးနေရမှာလည်းကြောက်သေး)))…
ကိုယ်ကဘဲ သိပ်လောကနဲ့ အဆင်မပြေသလားမသိပါဘူး….
ဲအဲဒီအဒေါ်အပျိုကြီးက ကုသိုလ်တော့ တကယ်ရပါတယ်။
သူ့ ကိုလည်းကျွန်မတို့ ကပဲ ပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်မှာပါ။
အဘိုးအဘွားတွေကိုလည်း သူပဲ အနည်းကပ်ပြုစုနေတာ၊
ကျွန်မတို့ က အဝေးကပဲ ထောက်ပံ့နိုင်တာ။ တနှစ်နေမှ တခေါက်လောက်သွားကြည့်နိုင်တယ်။
အမေအတွက် တွေးပေးပြီး၊ သိတတ်တဲ့ မရွှေအိမ်စည်ကိုလည်း ချီးကျူးမိပါတယ်။
၁။ အိပ်ယာထဲ ခွခေါင်းအုံးခွပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် သေးပန်းလို့ရခြင်း ။
၂။ လင်မရသေးတဲ့ အဆိုတော် မင်းသမီး မော်ဒယ် အားလုံးကို
သိမ်းကျုံးပီးသော် လည်းကောင်း တယောက်ချင်းစီသော်လည်းကောင်း
ပြောင်ပြောင်သော်လည်းကောင်း ကျိတ်ပီးသော်လည်းကောင်း အားပါးတရ ပြစ်မှားခွင့်ရှိခြင်း
၃။ လူမျိုးတူ လူမျိုးခြား ဘာသာတူ ဘာသာခြား အပျို ကြီး-လတ်-သေး များကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဗူးခွင့် ရှိခြင်း။
၄။ လာလာ ခလုပ်တိုက်သမျှသော သူငယ်ချင်း အထီးများအား ယောက္ခမသား ၊ အမ များအား ယောက္ခမ သမီး(ညင်းညင်း) ခေါ်ခွင့်ရခြင်း။
၅။ သမီးမွေးထားသော ဘော်ဒါအပေါင်း သူမြတ်လောင်းများအား သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ဖေဖေ၊ မေမေ ခေါ်ဖို့ ၀န်မလေးကြောင်း
၆။ လခထုတ်တဲ့ စလစ် ကို နီးစပ်ရာ အီဇာဂါယာ (ဒါကိုလီရှိဗက်) သေတင်းကုပ် တွင် အပ်ခွင့်ရှိခြင်း။
၇။ ပလက်ဖောင်း ခေါင်းအုံး ကြုံရာ အိမ် ထိုးအိပ် အိမ်ကို ပြန်လာချင်တဲ့အချိန် ပြန်လာချင်သလို ပြန်လာခွင့်ရှိခြင်း။
၈။ လက်ရာမကောင်းတဲ့ ဟင်းစုတ်စုတ်တွေ ကောင်းပါတယ်ကွယ် ဆိုတဲ့ မုသာဝါဒ သုံးကာ ကြိတ်မှိတ်မျိုရန်မလိုဘဲ
ပိုက်ပိုက်ရှိလျင်ရှိသလို ကြိုက်တာမျိုခွင့် ရှိခြင်း။
၉။ အန်ဒါဝယ်ယာ နဲ့ ခြေစွတ်များကို လျှော်ချင်မှ လျှော် လျှော်ချင်သလိုလျှော် မလျှော်လည်း အေးဆေး ဖြစ်ခြင်း။
၁၀။ ၀ါသနာပါရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ဇောက်ချပီး ကိုဖိရင်ဖိ မဟားဒယား လေ့လာလိုက်စားပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း။
၈။ လက်ရာမကောင်းတဲ့ ဟင်းစုတ်စုတ်တွေ ကောင်းပါတယ်ကွယ် ဆိုတဲ့
မုသာဝါဒ သုံးကာ ကြိတ်မှိတ်မျိုရန်မလိုဘဲ
တစ်နေ့ နှစ်ပုဒ်ပဲ တင်ပါနော်..
နတ်စည်းစိမ်ခံနေသူ အဂ္ဂမဟာ ဂန္ဓ ၀ါစက္က ပဏ္ဍိတ ဘိဝံသ အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာဂုရု အူးဘဇင်းဗိုက်
ဟာဂျီ မိုဟာမက် ဟာ့ဘီးဆပ်ဥ says:
ဟာဂျီ မိုဟာမက် ဟာ့ဘီးဆပ်ဥ.
ရွာထဲ တံဆိပ်တော်အပ်ပွဲ ဘယ်တုန်းကများလုပ်လိုက်တာလဲဟင်။ အနော်မသ်ိလိုက်လို့ဗျာ။
အခုတော့ အကုန်လုံးကို ရှိသမျှဘွဲ့တွေဝေပစ်လိုက်တယ်…
ကျေးဇူးပါ ဇမ္ဗူ့လောကပါလသီရိသုဓမ္မသိဂီ င်္အဂ္ဂမဟာကြောင်ဝတုတ် ရေ။
ဟိုရွာအပြင် ဇနပုဒ်တဲလေး ဆီမီးမှိန်တုတ်မှောင်ရီနဲ့ နေတဲ့ခင်ခမို့ မယူရဲပါ့ဗျာ။
မရွှေအိမ်စည်ပြောသလို နတ်စည်းစိမ်မခံစားရသော်ငြား အိမ်ကမိသားစုအရေး တထောင့်တနေရာက ၀င်ဖြည့်ပီးရင် ကျန်တဲ့ကိတ်စ ကို့သဘောကျတိုင်း လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ရှိတာမို့ နေပျော်တယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ဥပမာ။ ။ ရှိုးပွဲသွားချင်လား၊ ကမ်းခြေသွားအပန်းဖြေချင်လား၊ သူငယ်ချင်းတေစုပီး ဘုရားဖူးထွက်ချင်လား (ဒါမြင်သာထင်သာချိတာကိုဘဲပြောတာ၊ ခွက်ပုန်းကစ်တဲ့အခန်းမပါတေးဝူးး) ခိခိ။
“…ကိုယ်ကဘယ်သူ့အတွက်မှတာဝန်ယူစရာမလိုပါဘူး။ ရာသီဥတုပူလို့ ညဆိုရင် ကလေးကို ယောက်ျားကိုယပ်တောင်ခတ်ပေးနေစရာမလိုပါဘူး….”
မြန်မာရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်ပြီး ဒါတွေကို စိတ်ပျက်နေတာလား ခင်ဗျ ???
အဲဒီ ကိစ္စမျိုးဟာ လုပ်ကို လုပ်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက် မရှိပါဘူး ။
မိန်းမက လည်း လင်ကို ချစ်တဲ့ စိတ်နဲ့သူ့ မေတ္တာ နဲ့သူ မခိုင်းပဲ လုပ်ပေးကြသလို
ကလေးကိုလည်း အဲဒီလိုပါပဲ မိခင်မေတ္တာနဲ့လုပ်ပေးကြတာပါ ။
ခွေးမကြီးတောင် သူ့ သားသမီးတွေ အတွက် သဘာဝရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ကာကွယ်
အစအဆုံး ဖတ်ကြည့်ပြီး အပြုသဘော အမြင်ကို ပြောရရင်
၁ ။ အလွန် တကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း
၂ ။ မိမိကိုယ်ကို အထီးကျန်စေခြင်း
၃ ။ တာဝန်ယူလို စိတ်မရှိခြင်း
၄ ။ ကပ်စေးနည်းခြင်း
၅ ။ ဗရုတ်ဗရက် နေလိုခြင်း
စတဲ့ အချက်တွေကို မြင်လိုက်ရပါတယ် ။
ဒါနဲ့… ဇာဂါးမစပ်…… အူးလေးမ က ဘောပြား လား ဟင်င်င်င်င်င်
ဟုတ်ပါတယ် ကိုတပ်မ ။ သူများတော့ မသိ ကျမက နည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပါ့မယ်။
၄။ လက်ဖွာခြင်း ( အပူမရှိလို့ ရသမျှကုန်အောင် သုံးပါတယ်)
( ထမင်းစားရအောင် လို့ ခေါ်ရင်တောင် စိတ်မထင်တဲ့နေ ၀မ်းခြင်းဆုံတာမှတ်လို့ ဆိုပြီး ဘောက်ကော်တတ်ပါတယ်)
နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုက အပျိုကြီး လူပျိုကြီးများ အသက်ကြီးလာရင်
ပိုက်ဆံရှိမှဖြစ်မှာပါ ပိုိက်ဆံမရှိတဲ့ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေနားကို ဘယ်တူ တူမကမှ
မကပ်ချင်ပါ မငြိုမငြင်ပြုစုဖို့ဆိုတာ အင်မတင်မှ ရာခိုင်နှုန်းနဲပါတယ်
အခြွေအရံဆိုတာလည်း ခြွေနိုင်မှရံမဲ့သဘောရှိပါတယ် ……..
တို့က တော့ နဂိုကတည်းက အပျိုကြီးလုပ်ဖို့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသေချာနေပြီမို့ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်အပြီးမှာ ၉၉.၉ % သေချာသွားပါကြောင်း… ကျန် ၀.၀၁ % ကိုတော့ အာမ မခံပါ…
ဟဘာရယ်ဟုတ်ပါဘူး တစ်ခါတစ်လေ နွားနို့လေးဘာလေးသွားသောက်ရင်
ရေရောထားသလိုလို ဘာလိုလို ဘာလိုလို
ကိုယ်မှ မြက်ရိတ်မကြွေးထားတော့ ရေရောရင်လည်းရောပေမပေါ့ :harr:
အဂ္ဂမဟာ ဂန္ဓ ၀ါစက္က ပဏ္ဍိတ ဘိဝံသ အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာဂုရု ဘဒ္ဒန္တအူးဘဇင်းဗိုက် says:
ဇမ္ဗူတစ်ခွင် အလှဆင် Miss မြန်မာတို့ရဲ့ သခင် says:
လူပြိုကြီး လုပ်ချင်ဝူးးးးးးးးးးဂျာ ….
အဆင်သင့် စားဖို့လေးလည်း လုပ်ပေးချင်လို့ဂျ …..
၉။ အများ၏အားကိုးရာဖြစ်ခြင်း ……………….. ပီး မိမိကိုယ်တိုင်ကျ အားကိုးမဲ့နေခြင်း ..ချင်းးးး ချင်းးးးး
(((လူပျိုကြီး)))) ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းပိုစ့်ကတူတယ်မလား…၀န်ခံရင်ပြီးတာပါဘဲ…
မဟာသီရိသုဓမ္မ အာကာမိုးမြင့်ကောင်းကင်ဝေယံပျံချီ ဝေဟင်သိမ့်သိမ့်တုန် လုံမမွန်မွန် says:
ဟုတ်လိုက်လေ မှန်လိုက်လေ အစ်မရေ…
တစ်ယောက်တည်းနေပီး ပိုက်ပိုက်ဒွေလှိမ့်ပိမ့်ချာ… ပီးရင်း အထုတ်ကြီးကိုင်ထားပီး တူ၊ တူမဒွေကို ပြုစုအောင်စည်းရုံး…အဲ ဘူမှ မပြုစုဘူးဆိုရင် အဲ့အထုတ်ကို လှူပီး ရိပ်သာကို ဒိုးမယ်.. ဒန် ဒန့် ဒန်…
အနန္တ စကြဝဠာ ဘာညာသာရကာ နေကြာကွာစိ အံစာငတိ says:
လင်ယောက်ျား မရှိတဲ့ မိန်းမဟာ မတင့်တယ်ဘူး … တဲ့ …
ကျုပ် စောင့်နေပါ့မယ် …
အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ် … ဟီးးး
အခု မိန်းမ မယူရသေးဘူးဆိုတော့ ပြောထားသမျှအကုန်ထောက်ခံပါတယ်..
မိန်းမ ရပီးမှပဲ ပြန်လာ ငြင်းဘာ့မယ် ဗျာ….
အပျိုကြီး လူပျိုကြီး အားနည်းချက်တွေကို ပဲအပြစ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် အားသာချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ချေပရတာပေါ့။ ဒါသဘာဝပါပဲ။
အရာရာတိုင်းမှာ အားနည်းချက်အားသာချက်ဆိုတာရှိစမြဲပါ။ နည်းတာများတာတော့ကွာမယ်ပေါ့။
ဆေးပေးမီးယူဆိုပြီး ယူ၊ သားထောက်သမီးခံရအောင်ဆိုပြီးယူ အဲဒိယူတဲ့သူတွေအားလုံးအိုဇာတာကောင်းပါရဲ့လား အသက်ကြီးမှသားသမီးကဂရုမစိုက်လို့နားမလည်ပေးလို့အချိန်မပေးနိုင်လို့ဆိုပြီး ၀မ်းနည်းအားငယ်စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ အဖိုးကြီးအဖွားကြီတွေရှိပါတယ် (အားလုံးမဟုတ်ပါ)
သားသမီးလည်းမရှိ ယောက်ျား (သို့) မိန်းမ တဦးဦးကသေပြီးတော့ တူ တူမ အားကိုးနေရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။
နောက်သားသမီးကဆိုးသွမ်းလွန်းလို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဇရပ်တွေမှာခိုကပ်နေရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။( စော်ဘွားကြီးကုန်းကမဟာဆေးဝင်္ကဘာ
နောက် အပျိုကြီး လူပျိုကြီး ဖြစ်တော့ရော မကောင်းဘူးလား ကောင်းသလားဆိုတာမှာ
တချို့ကတော့ ဆွေမျိုးတွေကသိတတ်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရသူတွေ မိခင်နဲ့တန်းတူမဟုတ်တောင်
ချစ်တဲ့ တူ တူမတွေကြောင့်စိတ်ချမ်းသာစွာနေရသူတွေလည်းရှိပါတယ်။
အဲဒိမှာ လူတိုင်းတော့မဟုတ် အသက်ကြီးပြီး အထီးကျန် အားငယ် စိတ်ကျပြီးဂေါက်သွားတဲ့
အဲဒိတော့ကာ (ဟူး မောလိုက်တာပြောရတာ အဲလေ စာရိုက်ရတာပြောပါတယ်)
ဘယ်လိုပဲဖြစ်လာဖြစ်လာစိတ်ထားမှန်စွာနဲ့ တရားတော်တွေနှလုံးသွင်းပြီး ဘ၀ခရီးလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ပဲ..။
သဘာဝ တရားကို အဖြစ်မရှိတိုင်း…ပညာတက်တိုင်း..
သူတပါးအတွေးအခေါ်မှားအောင် မလုပ်ပါနဲ့ ….